Gobalka Banaadir oo markii ugu horaysay Matalaad ku yeeshay Shirka Amniga Qaranka ee Somalia. – Hornafrik Media Network
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu shirkan daba socdo shirkii bartamihii bishii Abriil ee sanadkan lagu qabtay Madaxtooyada Soomaaliya. Isla markaana looga dhawaaqay Golaha Amniga Qaranka iyo qorsheyaal kale oo ay kamid ahaayeen dib u dhiska ciidamada qalabka sida iyo xoojinta dagaalka lagu jiro kooxaha argagixisada ah.
Maamulka Gobalka Banaadir oo aan horay Matalaad ugu lahayn Shirarka heerkan ah oo lagu qabto Muqdisho ayaa markii ugu horaysay Shirkan ku yeeshay Matalaad. Waxaana ka qayb galay Gud Gobalka Banaadir, Thaabit Abdi. iyadoona tallaabadan ay Muqdisho ku yeelatay Matalaadda Shirarka lagu gorfaynayo aayaha Dalka ay ku timid dadaal ay sameeyeen Maamulka Cusub ee Gobalka Banaadir iyo Maamuladdii ka horeeyay.
Shirka ayaa lagu wadaa in la soo gaba gabeeyo maalinta berri, waxaana la filayaa in laga soo saaro war murtiyeed ku aadan arrimaha amniga dalka.
Gud Thaabit oo ka soo muuqday Shirka Amniga Qaranka.
Madaxwayne Gobaleedyadda Jubbaland, KG, Wasiirka Gaashaandhiga iyo Duqa Muqdisho.